Samy manana petra-bola avy ireo mpiara-miombon'antoka ireo (Actionnaire), ka ampanaovina fanekena an-taratasy fotsy, tsy misy daty fa voasonia mialoha, fa azo sotonina aminy ireo petra-bola nomena azy ireo raha misy fanapahan-kevitra hafa isintonan'ny Cnaps izany, bordereau de transfert d’action en blanc (non daté).
Mpikambana ao anatin'ny Filan-kevim-pitantanan'ny Cnaps Investissement ity, ny Talen'ny fitantanam-bola eo anivon'ny Cnaps, miampy olona roa hafa manana fahaizana manokana, izay tendren'ny Tale Jeneralin'ny Cnaps hatrany.
Misy moa arak'izany ny Filohan'ny Filan-kevim-pitantanan'i Cnaps Investissement, sy ny Tale jeneraly mitantana azy.
Apetraka ny fiarahan'ny Cnaps reniny sy ny Cnaps Invest, izay tsy hifampiditra amin'ny fananana, tsy voafetra ny fiaraha-miasa, na misy fetra fa azo avaozina tsy mila fifanarahana vaovao.
Azo omena vola tambiny amin'ny fiaraha-miasa ny Cnaps Invest.